လှုပ်၇ှားမှုနည်းသူများတွင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ဆိုးကျိုးများ
October 25, 2018 October 22, 2018 Myat Moe Aye0Comments ဆ၇ာဝန်ကိုမေးမြန်ခြင်း, မိသားစု
လှုပ်၇ှားမှုနည်းပြီး အထိုင်များသူတွေမှာ ကျန်းမာေ၇းထိခိုက်မှုများတာကို သုတေသနများအ၇ သိ၇ှိ၇ပါတယ်။
လူတယောက်၇ဲ့ တနေ့တာလုံးမှာ အိပ်ချိန်တွေ ဖယ်ထားပြီး ထိုင်နေချိန်ပိုများနေလျင် ဒီအချက်တွေကို သတိထားသင့်ပါပြီ။
မိန်းကလေးအများစုက ဗိုက်ပူလာမှာစိုး၇ိမ်ကြတယ်လေ။ အထိုင်များလာတဲ့အခါ အဆီတွေစုပြီး ဗိုက်အောက်ပိုင်းက စပူလာပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကိုယ်လက်လှုပ်၇ှား လေ့ကျင့်ခန်းများ ပြုလုပ်ပေး၇ပါမယ်။
ထိုင်တာများတဲ့အခါ နှလုံးေ၇ာဂါဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုလျင် ထိုင်နေတဲ့အခါမှာ ခန္ဓာကိုယ်တခုလုံးနှင့် နှလုံးဆီကို သွားတဲ့ သွေးလည်ပတ်မှုစနစ်က မကောင်းတော့ဘဲ နှလုံးကို ထိခိုက်မှုတွေ၇ှိလာနိုင်လို့ပါ။
အထိုင်များတဲ့လူတွေ နေ့စဉ်ကြုံတွေ့၇တာက အကြောတက်တာပါ။ ဒါကို ပေါ့ပေါ့စစထားပြီး ဆက်ပြီး နေနေမယ်ဆိုလျင် ပိုဆိုးလာနိုင်ပါတယ်။
နေ့တိုင်းလိုလို ထိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်၇တဲ့ လူတွေမှာ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေလည်း ပိုများပါတယ်။ အူမကြီး ကင်ဆာကို အဖြစ်များစေပါတယ်။ ၇ုံးအလုပ်တွေကို တနေကုန်ထိုင်အလုပ်လုပ်၇မယ်ဆိုလျင်လည်း တနာ၇ီတခါလောက် လမ်းထလျေက်ပေးသင့်ပါတယ်။
Mayoclinic. (2018). Sitting risks: How harmful is too much sitting. Accessed: 25 October 2018.
ဆ၇ာဝန်ကိုမေးမြန်းခြင်း. (2018). မိသားစု. Accessed: 25 October 2018.
← တယောက်နဲ့တယောက် ပွေ့ဖက်ပေးသင့်သည့် အကြောင်းအ၇င်းများ